Akụkọ - Ọrịa Na-efe Ọrịa, Na-ezipụ N'oge!
Iguzogide ntiwapụ nke ọrịa noval coronavirus, ndị ọrụ nke SHEHWA na-eme ihe niile dị mkpa iji kwado "ikpe ọrịa nje", ma na-agbasi mbọ ike ibute mbupu n'oge.
On Mar.5th, 2020, a ogbe nke TS160-3HW bulldozer zigara South East Asia ahịa na oge. Na Feb.3rd, 2019, SD6KLGP hydrostatic driving bulldozer rụpụtara na-agbakwunye ihe ndị ahịa chọrọ ka enyere ndị ọrụ njedebe nke ahịa Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
SD6K bụ track-ụdị ngụkọta haịdrọlik klọọkụ na ọkara isiike kwụsịtụrụ, electronic akara tier Ⅲ, sọrọ-na sekit na kọmputa akara hydrostatic ịnya ụgbọ ala usoro, electric akara mechiri emechi center ibu na-eziga mejuputa haịdrọlik usoro.
SHEHWA na-etinye usoro mmemme sayensị na teknụzụ dịka usoro agbakwunyere nke "Production, Study, Research, Realization", dozie ma gbajie ụzọ dị na teknụzụ, meziwanye ikike ịhazi yana lever nke ukwuu. Na 2011, SHEHWA mepụtara ụwa dị elu eletriki eletriki eletriki SD7K
bulldozer, SD9 bulldozer na-enweta ihe Nlekọta Ngwaahịa Ọhụrụ Dị Mkpa na Ntanetị Sayensị na Nkà na incezụ. SD8 bulldozer na-enweta Asambodo Asụsụ International. SD8 reclamation bulldozer na-enweta Hebei ógbè Metallurgy Science and Technology Awards.
SHEHWA-agbaso ahịa na nkà ihe ọmụma: "gbakwasara ahịa, na-elekwasị anya ndị ahịa dị ka isi", implements Integrated ọrụ & management nlereanya ekpuchi azụmahịa 、 akụkụ ahụ mapụtara na ọrụ, ka a ngwa ngwa na-aza usoro na elu na-arụ ọrụ arụmọrụ, n'oge ọrụ. SHEHWA eguzobewo ihe karịrị alaka 30 na China niile, ma guzobe usoro mmekọrịta oge na nkwado mmekọrịta ya na ndị ahịa 50 ọkachamara. Ahịa & ọrụ ntanetị na-ekpuchi mba niile, ngwaahịa na-eme otu ihe ahụ, ma na-ebupụ ya na Russia, South-America, Africa, Middle-East region wdg, ihe karịrị mba 90 na mpaghara, ma wulite mmekọrịta dị ogologo oge na nkwado ndị na-ere ahịa mpaghara.
SHEHWA ga-eso ụkpụrụ nke kpam kpam mmemme, sequentially & nwayọọ nwayọọ ebugharị, n'usoro na-emepe emepe, na-akwalite mmepe nke ise ụlọ ọrụ metụtara na-ewu ígwè 、 Ngwuputa ígwè 、 metallurgical & gburugburu ebe obibi-echebe ígwè 、 mgbatị & isi akụkụ 、 ígwè miri-nhazi wdg, ma na-eme oké mgbalị iji mezuo SHEHWA na-aghọ a oge a na ngwá rụpụta enterprise na ọnọdụ nke na-eduga-anụ ụlọ, mba mbụ na klas, ike na injinịa 、 Ngwuputa ígwè 、 metallurgical & gburugburu ebe obibi-echebe ígwè.
SHEHWA ga-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa nke "Mepụta uru maka ndị ahịa" iji mezuo ọrụ ndị na-ere ahịa.